Ixesha kunye nabahlobo 42
Ingaba ixesha kwizahlulo zalo zibe yiminyaka, inyanga, iiveki, iintsuku, iiyure, imizuzu kunye nemizuzwana nayiphi na incwadi kunye nenkqubo yomzimba okanye ezinye iinkqubo emzimbeni womntu? Ukuba kunjalo, zeziphi iibhalelwano?
Kukho unxibelelwano ngqo phakathi kwemilinganiselo yendalo yexesha ngemijikelezo yelanga, inyanga kunye neeplanethi kunye neenkqubo ezithile zomzimba emzimbeni womntu, kodwa ulwahlulo olwenziwe kukungqinelana komoya womntu aluchananga.
Indalo iphela xa imelwe yinto yonke enokubonwa okanye iqondwe ngamazulu okanye indawo; le ndalo ihambelana nomzimba wenyama; Amaqela eenkwenkwezi, umzekelo, ahambelana nerves kunye ne-ganglia emzimbeni. Ilanga, inyanga, umhlaba kunye neenkwenkwezi ezibizwa ngokuba ziiplanethi ngeesathelayithi okanye inyanga, zihamba ngokwazo komoya.
Ukuthetha okanye ukuthatha ixesha 'lokulandelelana kweziganeko kwindalo yonke, "okuphawulwa kukuhamba kwezinto ezibizwa ngokuba zezemizimba esezulwini kwesomhlaba, kunye neenguqu kunye neziganeko zokwenza oko ngokunxulumene nomhlaba, kukho unxibelelwano phakathi kwezi I-phenomena kunye nomzimba oqhelekileyo womntu ohambelana neenkqubo zomzimba kunye notshintsho kunye neziphumo zokuvela. Kodwa akulunganga kukhuseleko lwethu ukuzifumana ezi zinto; hleze sivule ibhokisi kaPandora.
Kubalulekile kwaye kwanele ukuba wazi ukuba kukho iintsholongwane ezimbini emzimbeni womntu ezimele ilanga kunye nenyanga. Inkqubo yokuvelisa emzimbeni iyahambelana kwaye inxulumene nenkqubo yelanga. Kodwa lungu ngalinye kwinkqubo yelanga linamalungu alo ahambisanayo emzimbeni. Imbewu nomhlaba kwinkqubo yokuveliswa kwezinto ziziphumo zentshukumo yamalungu emzimbeni ehambelana nelanga nenyanga. Ubungakanani okanye izicatshulwa ezibangelwa sisenzo samalungu, ziyahambelana kwaye zihambelana neeplanethi, zenza umsebenzi wazo kusetyenziswa iinkqubo ezahlukeneyo zomzimba, kwaye zonke zisebenza kunye kuqoqosho ngokubanzi lomzimba kwixesha lobomi bayo bendalo, ukuze umsebenzi othile usebenze kubo ubomi.
Kukho emzimbeni umgaqo-nkqubo omele kwaye ohambelana nelanga. Oku kudlula kwaye kunyuke okanye kujikeleze umzimba, njengoko ilanga kuthiwa lenza isangqa esinye esipheleleyo kwiimpawu ezilishumi elinambini zodiac. Ukusuka kwi-aries ehambelana nentloko yomntu, ezantsi ngendlela yomhlaza wesibonakaliso, ehambelana namabele okanye esifubeni, kumqondiso ohambelana nendawo (hayi amalungu) ezesondo, kunye nendlela yophawu lwentloko, ehambelana nomqolo kwindawo yentliziyo, kwaye ubuye kwakhona ukuze ube neentloko, kudlule intsholongwane okanye ilanga lomzimba ngenxa yeempawu zodiac ngexesha lohambo olunye lwonyaka. Kukho emzimbeni enye intsholongwane emele inyanga. Intsholongwane yenyanga kufuneka idlule kuzo zonke iimpawu zodiac yayo. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukuba njalo. I-zodiac yenyanga ayisiyo i-zodiac yendalo iphela. Inyanga yenza uguquko ngokusebenzisa i-zodiac yayo emzimbeni kwiintsuku ezingamashumi amabini anesithoba kunye neentsuku ezinamaqhezu, ehambelana nenyanga enyangeni. Xa inyanga igcwele ikwi-aries ye-zodiac yayo kwaye intsholongwane yayo ehambelana emzimbeni mayibe sentlokweni; ikota yokugqibela ngumhlaza we-zodiac yayo kunye nesifuba somzimba; ubumnyama benyanga bujika buye enyangeni entsha yi-libra ye-zodiac yayo kwaye ke intsholongwane yayo emzimbeni ikummandla wesondo. Kwikota yokuqala yenyanga ekwi-capricorn yayo kwaye intsholongwane esemzimbeni kufanele ukuba ihambisane nentambo yomgogodla ecaleni kwentliziyo, kwaye ukusuka apho intsholongwane yomzimba kufuneka idlulele phezulu entloko, xa inyanga igcwele uphawu lwayo . Ke unyaka welanga kunye nenyanga enyangeni ziphawulwa emzimbeni ngokudlula kweentsholongwane zazo ezimele emzimbeni.
Iveki mhlawumbi lelona xesha lide kakhulu kwikhalenda yomntu. Kubhalwe phantsi kwiikhalenda ezona zindala zabantu. Abantu banamhlanje, ngokuyimfuneko, bayibolekile kubo. Usuku ngalunye lweveki luhambelana nelanga, inyanga kunye neeplanethi, ukusuka apho iintsuku zithathe amagama azo. Ubomi bomzimba womntu buhambelana nokubonakaliswa kwenkqubo enye yelanga. Iveki emzimbeni womntu ihambelana ngamanqanaba amancinci ngokufanayo.
Umhla, oluguquko lomhlaba kube kanye ujikeleze i-axis yawo, lelinye lamaxesha asixhenxe evekini, kwaye kulo ixesha likhulu limelwe kwakhona. Kwinyama yomntu, intsholongwane okanye umgaqo ohambelana nomhlaba wenza umntu azalise umjikelo wawo ngenkqubo ethile, ehambelana nokutshintsha komhlaba. Le imbalelwano, unyaka nenyanga, inyanga, iveki, usuku kunye nokusebenza komzimba womntu, iphelela nosuku. Maninzi amanye amanyathelo amancinci 'alandelelwano lwezinto ezenzeka kwindalo iphela' ezingqinelana ngqo nezinto kunye neenkqubo emzimbeni womntu. Kodwa kule yure, umzuzu kunye neyesibini, kuya kubangwa uhlobo lokufanisa phakathi kwendalo iphela kunye nokomzimba olubanga uhlobo lokufanisa phakathi kwendalo iphela neyomzimba. Ilixa, umzuzu kunye nesibini kunokuthiwa ngokuthelekisa amanyathelo ale mihla. Xa umlinganiso obizwa ngokuba ngowesibini wamkelwe yacingelwa ukuba ikufutshane nje loo nto kungasayi kubakho mfuneko yakutyahlulahlulahlula. Inzululwazi yezomzimba yenze impazamo enye xa benika igama leatom kumanqaku emizuzu yento ababeyithatha njengezinto zokuqala. Emva kwexesha bafumanisa nganye kwezi "atom" njengendalo encinci ngokwayo, izahlulo zazo ezazibizwa ngokuba zii-elektroniki, ii-ion, nangona kunjalo Umzimba womntu ulawulwa kwaye kufuneka usebenze ngokuhambelana nezinto ezenzeka kwindalo iphela, kodwa ngokungenasiphelo umntu uphazamisa iinkqubo zendalo kunye nemisebenzi eqhelekileyo. Emva koko ungena engxakini. Ubuhlungu, ukubandezeleka kunye nezifo ziziphumo, ezizinto ziinkqubo zendalo kumzamo wendalo wokubuyisela imeko eqhelekileyo. Ezi nkqubo emzimbeni womntu zinokuhambelana kwazo kunye neengxabano kunye ne-cateclysms kwindalo, ukugcina ulungelelwano. Ukuba umntu emzimbeni wakhe uzakusebenza kunye not kakhulu ngokuchasene nendalo unokufunda ngqo imbalelwano phakathi kwecandelo ngalinye lomzimba kunye nenxalenye yalo ehambelana nendalo kunye neenkqubo zabo zokuphindisela.